> Resource > Ladnaansho > Flash Card Data Recovery: 3 Talaabada inuu ka soo kabsado Xogta laga Flash Card
Card Flash waa nooc ka mid ah qalab lagu kaydiyo dhigaya isticmaalka Memory Flash technology in xogta lagu kaydiyo. Noocan ah card ayaa si weyn loo isticmaalaa in qalabka sida digital camera digital, telefoonka gacanta, ciyaaryahanka music. Card CF, kaarka MMC, kaarka SD, Memory ul iyo kaarka XD yihiin oo dhan kaararka flash. In kastoo card flash waa raaxadeeda waxa kaydinta xogta digital, weli waa ay adag tahay si looga fogaado dhibaato soo gaartay xogta. Xogta card Flash lagu lumin karaa sabab u tahay qalad nidaamka, tirtirka shil ah, MIS-maaraysay, jeermiska fayraska ama sababo kale. Marka dhibaato card xogta khasaaro flash, waxaad u baahan tahay flash software kabashada xogta si ay kuu caawiyaan.
Wondershare Data Recovery for Mac ama Wondershare Data Recovery waa mid ka mid ah xulashada ugu fiican ee aad u. Waxaa si buuxda la jaan qaada dhammaan noocyada kala duwan ee kaararka flash. Feature ayaa ugu awooda badan ee Wondershare Data Recovery waa in uu awoodo in uu ka soo kabsado noocyo kala duwan oo files ka card flash, oo ay ku jiraan sawir, video, document xafiiska, file archive, email, audio, iwm
Hadda waxaad ka heli kartaa version tijaabo ah inuu ka soo kabsado xogta ka card flash.
Qabtaan Recovery File Flash Card ee 3 Talaabooyinka
Halkan aynu soo kabashada card flash habka Mac la Wondershare Data Recovery for Mac. Si aad u soo kabsado xogta card flash ka computer Windows, fadlan kala soo bixi version Windows ah.
Tallaabada 1 Select Recovery Mode inay bilow Flash Card Data Recovery
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo ordaya Wondershare Data Recovery for Mac, waxaa lagu siin doonaa 3 kabashada hababka uu ka soo xusho. Aan isku dayno "lumay Recovery File" wada.
Fiiro gaar ah: Fadlan xirmaan card flash aad la leedahay Mac iyo in la hubiyo in loo aqoonsan karo sida drive adag on your Mac.
Tallaabada 2 Dooro Flash Card aad Sawirka u Khasaaray Data
In tallaabadaas, barnaamijka wuxuu muujin doonaa oo dhan drives on your adag Mac. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah kaarka flash iyo guji "Scan" inaad raadiso files lumay.
Fiiro Gaar ah: "Enable Deep Scan" waxaa laga heli karaa haddii aad rabto in aad hesho natiijo iskaanka fiican, laakiin waxa ay qaadataa muddo ka badan scan caadiga ah. Ka sokow, waxaad nadiifin kartaa natiijada iskaanka doorataa nooca file in iskaan ah.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh helay Flash Card Data ceshan Files Xulo
Ugu danbeyn, oo dhan content helay lagu soo bandhigi doonaa fayl ama nooc file ee bidix. Waxaad dib u eegi karaa magacyada faylka si aad u hubiso in ay yihiin waxa aad rabto in aad dib u soo ceshano ama aan. Plus, kuwaasoo ah idinka ee ku eegaan kartaa sawirada.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan files ceshan iyaga adigoo gujinaya "Ladnaansho". Fadlan dooro meel si loo badbaadiyo kuwa files soo kabsaday. Waxaa muhiim ah si ay u sii meel kale oo aan ahayn in kaarka flash, sababta oo ah data overwritten keeni kara in ay dib u soo kabashada failure.